Chii chinonzi shanduko-diki uye zvine njodzi sei? | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Nyika yanhasi izere nemiyedzo mizhinji uye nemiyedzo, saka zvinogona kuve zvakaoma kwazvo kuramba chimwe chinhu chitsva. Izvi zvinoshandawo kuhukama nevakomana kana vasikana.
Kunyangwe kana murume aine mukadzi uye akaroora achifara, pane mukana mukuru wekuti pfungwa dzinomuka nezve mumwe, anozova shamwari nyowani kwemaminetsi mashoma. Masayendisiti ari kuita nharo pamusoro peiyi mamiriro, nekuti inogona kutariswa micro-shanduko kana kumukira chaiko.
Kana mukadzi akapiwa rumbidzo zhinji zuva rega rega, uye mukadzi achidzosera anotarisa kune vamiririri vevakomana kana vasikana, saka izvi zvinogona kutorwa sekutengesa chaiko here? Izvi ndizvo zvichakurukurwa pazasi.
Kubiridzira kunodaidzwa kuve nehukama hwepedyo nemunhu asiri wepamutemo mukadzi kana mudiwa. Nekuda kweizvozvo, zvimwe zvisungo zvinotyorwa.
Pfungwa yakadaro se "micro-shanduko" yakaonekwa kwete kare kare, asi zvakadaro pane nharo zhinji pamusoro peicho chaicho. Izwi iri rinotora kuvepo kwekutaurirana muchivande nevamwe vanhu, uye zvakanyatsovanzwa. Hukama hwakadai hunogona chete kuve hwerudo kana, hwepedyo (vadikani).
Dzimwe nguva zvinotungamira mukubuda kwehukama hwehukama kune mumwe munhu asina hukama chaihwo. Uku kutaurirana kunogona kuitwa zvirinani, ndiko kuti, kuburikidza nesocial network kana akakosha masosi. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti mune ino kesi hapana kusangana panyama (hapana tenzikadzi kana mudiwa). Kune rimwe divi, zvinogona kutaridza kuti shanduko-diki haina njodzi zvachose uye haidi kutariswa kwakasarudzika. Asi muhupenyu, imhaka yeizvi kuti nhamba huru yevakaroora vanoputsa.
Zviratidzo zvinotevera zve microchanges zvave kuzivikanwa
Kuvapo kwekugara uchivanzika tsamba nemurume kana murume pabonde;
Kuitisa hurukuro yepedyo nemumwe munhu anokwezva mune izvi;
Kukurukurirana kwehukama huripo nemutorwa;
Kubiridzira maererano nekuva nemumwe wako chaiye, uye izvi zvinoitika usingadi;
Munhu akanaka anonyorwa aine zita rekunyepedzera.
Nekuda kwezviratidzo zvakaratidzwa, zvinokwanisika kumisikidza chokwadi chekuvapo kwema microchanges muhukama.
Kana zvichidikanwa kuti uzive huvepo hwechirwere chakadai mune mumwe wako, saka panenge pasisina matambudziko akasarudzika neizvi. Muchokwadi, izvo zviratidzo zvakanyanyisa kufanana nekuzara-kutengesa (kutaridzika kwemudiwa (s)).
Semuenzaniso, zvakajairika kuti murume kana mukadzi achinje zvakanyanya maitiro avo, uye kwete chete muchokwadi, asiwo pasocial network. Tiri kutaura nezvekushandurwa kwemaitiro ekupfeka uye kunyorwa kwemazhinji mapositi pane rako peji. Kana iyo imwe hafu iri padyo, ipapo chidzitiro chefoni mbozha chinodzima nekukasira, kana tabo pakombuta yakavharwa. Neichi chikonzero, pfungwa dzakasiyana dzinotanga kubuda nezve zvingangoita matambudziko muhukama. Nyanzvi dzezvepfungwa dzinokurudzira kupokana nekukasira kupomera kwekutengesa.
Pane here kutyisidzira kuhukama chaihwo
Kazhinji, zviratidzo zvakadaro zvinoonekwa mune maviri aripo, saka iwe unofanirwa kutarisisa kune rinogona kuitika dambudziko panguva yakakodzera. Kana munhu achivanza kunyorerana tsamba, izvi zvinoratidza hunyengeri hwemweya wake uye nekutsvaga kugutsikana kwetsika nemunhu wekunze. Nekungogara uchinyengedza, iko kwakavanzika kuviga kweiyo-diki-shanduko kunoonekwa, saka pfungwa dzechimwe chinhu chinotanga kuoneka, ndiko kuti, kutamisa hukama hwakadai kubva pasirivhu yepasi kuenda kuchokwadi.
Hazvikurudzirwi kungonyarara uye kumirira imwe hafu kuti imise mitambo yakadaro. Zvikasadaro, izvi zvinotungamira mukuoneka kunoratidzika kwevatenzi (s) nekuparadzwa kwevakaroora.
Nzira dzekurwisa microchanges
Kutanga, iwe unofanirwa kuunza mudiwa wako kuhurukuro yechokwadi uye kumisikidza miganho yezvinobvumidzwa, ndiko kuti, mupe iye kune izvo zvinogamuchirwa uye zvisinga gamuchirwe. Vamwe vanhu vanogona kutora kunyorerana kwakadai kusanzwisisana kuri nyore, nepo vamwe vachiti ndiko kutengesa chaiko kunoitwa nemunhu waunoda. Izvo zvakakosha kuti uzive mwero wemanzwiro ayo mudiwa ane iye kune iye uyo ari chaiwo kutaurirana kunoitiswa. Dzimwe nguva zvinoitika kuti imwe hafu haitaure chero mazwi emutsa uye kurumbidza, saka unofanirwa kuitsvaga parutivi.
Ndiani anovenga mukadzi?
Maitiro ekuratidza kumusikana kuti unomuda
Mhizha kubva pasita yePasika: master kirasi
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,487 masekondi.